ब्ल्याकबेरी उत्पादकता बिर्सनुहोस्, बहु-टास्किंग जीत Martech Zone
ब्ल्याकबेरी उत्पादकता बिर्सनुहोस्, बहु-टास्किंग जीत
बुधबार, अप्रिल 14, 2010 बिहीबार, जुन 18, 2015 Douglas Karr
गत जुलाई म ब्ल्याकबेरीमा सरे। समय बित्दै जाँदा मैले अनुप्रयोगहरू भेट्टाए र स्थापना गरें, यो ढिलो र ढिलो भयो। यो यस्तो देखिन्थ्यो कि अनुप्रयोगहरू दोस्रो विचार थिए र ब्ल्याकबेरी तिनीहरूलाई चलाउन कहिल्यै डिजाइन गरिएको थिएन।
मलाई गलत नबनाउनुहोस्, मलाई ट्वीट्सको स्ट्रिम मनपर्‍यो (नयाँ ट्विटर अनुप्रयोगलाई धन्यबाद), फेसबुक अपडेट, कल र पाठ सन्देश एकल विन्डोमा। के मैले ह्यान्डल गर्न सकीन्छ त्यो सतर्कताहरू खाली गर्ने प्रयास गर्दै थियो वास्तवमा फोन कललाई उत्तर दिन। जब म कलमा थिएँ, मेरो कलर भ्वाइस मेलमा थियो। अरु धेरै निराश हुन सक्दैन। सबै पछि ... यो एक फोन हो!
समस्या यो हो कि मलाई फोन र अन्य उपकरणहरू चाहिन्छ। मलाई ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन, इभर्नोट, नक्सा, भिजुअल भ्वाइसमेल र अन्य उपकरणहरूको एक टोन आवाश्यक पर्दछ। म निरन्तर मेरो बच्चाहरूलाई टेक्स्ट गर्दैछु र ग्राहकहरूबाट सन्देशहरू सबै चीज मार्फत प्राप्त गर्दछु तर मेरो फोन मार्फत। मलाई एउटा मेशीन चाहिन्छ जुन बहु-कार्य गर्न सक्दछ।
म एक एप्पल केटा हुँ - २ म्याकबुक प्रो, एक नयाँ टाइम मेशिन, एक एप्पलटीभी र एप्पल पुरानो मा भरिएको एउटा कपाटको साथ। एक दशक भन्दा बढि म विन्डोजको मान्छे थिए जब मित्र बिल डाउसनले एउटा कम्पनीमा कुरा गर्यो जुन हामीले मेरो पहिलो म्याकबुक प्रो बनाउनको लागि काम गर्यौं। मैले पछाडि फर्केर हेरेको छैन! म एक एप्पल पंथ मान्छे वा एक स्नूप होइन - म स्वीकार गर्दछु कि एप्पल केवल वास्तवमै उत्कृष्ट छ किनकि उनीहरूले हार्डवेयर र सफ्टवेयर नियन्त्रण गर्छन्। माइक्रोसफ्ट जस्तो कम्पनीमा यो ठूलो फाइदा हो जसले हार्डवेयरको असीमित रकममा चल्ने फ्लोटेड अपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम गर्नु पर्छ।
तर मैले आईफोन पाइन। मैले एक Droid खरीद गरें। हामीसँग घरमा पहिले नै आईफोन रहेको छ - मेरी छोरीले एक चाहान्थी र उनले मलाई आफ्नो गुलाबी घेर्ने बनाएको कारण मैले त्यसको लागि किनें। जहिले पनि म उनलाई कल गर्छु, यस्तो लाग्छ कि हामी दुई टिन क्यान र हाम्रो बीचमा स्ट्रिंगले कराइरहेका छौं। माफ गर्नुहोस् AT&T, तपाईंको कल गुणस्तर बेकार छ। म जहिले पनि कसैलाई आईफोनमा कल गरिरहेको बेला भन्न सक्छु किनभने घण्टीको ध्वनी पुरानो स्क्र्याच रेकर्ड बजाएको जस्तो देखिन्छ। यो वास्तवमै भयानक छ।
जब एप्लिकेसनहरूको कुरा आउँदछ, एप्पलको बढ्दो कष्टप्रद तानाशाही शैली प्रबन्धनको कारण मैले आईफोन पनि लिएन। एडोबको उनीहरूको खराब-महौंलाइ गरिब स्वाद बाहेक केही छैन ... एडोब विगतका वर्षहरूमा एप्पलको लागि धेरै राम्रो भएको छ। म उद्देश्य सीमा पनि अनुप्रयोगहरू विकास गर्न चाहन्न। मैले प्रयास गरें। यो बेकार छ। मलाई पुग्यो।
म बरु लचिलोपना, उत्तम गुगल एकीकरण, र अनुप्रयोग र अनुकूलन स्वतन्त्रता को साथ एक शक्तिशाली फोन मा सर्ने थियो। मैले ब्ल्याकबेरीसँग सुरुमा गरेको केही उत्पादकत्व गुमाउन सक्छु ... तर अब मसँग बहु-टास्किंग उपलब्ध छ। मलाई लाग्छ संयोजन लामो समयसम्म धुनु पर्दछ।
अफलाईन हुनुहोस्, अनप्लग हुनुहोस्, कम्तिमा केही समयको लागि
अप्रिल 15, 2010 मा 6: 52 एएम
जब आईफोन O.० O / S बाहिर आउँदछ ... तपाईं माफ गर्नुहुनेछ! 🙂